Ukudedelwa kukaGumede I-ANC e-KZN, kwenza impilo ibe lula ku-Ace | Scrolla Izindaba
Ukudedelwa kukaGumede I-ANC e-KZN, kwenza impilo ibe lula ku-Ace
I-ANC KwaZulu-Natal isenzele uNobhala weqembu u-Ace Magashule umusa omkhulu.
Ikomidi layo lezobuqotho selisuse uZandile Gumede enkohlakalweni – ngaphandle kokuyalelwa inkantolo.
“UNkulunkulu ungakimi futhi uyangivikela ezitheni zami,” kusho uGumede.
Lesi sinqumo siphakamisa ukugxekwa okutholwe yikomiti lobuqotho leqembu akuvumelani.
ObeyiMeya kumasipala omkhulu wezigidigidi, ubhekene necala lenkohlakalo yethenda yemali eyizigidi ezingama-R430 le-Durban Solid Waste eliqhubekayo.
Kodwa ikhishwe phambili iqembu.
Ngosuku olulodwa iKomidi le-ANC likazwelonke lokuBambisana, lihlale kwelinye idolobha, lanquma ukuthi uMagashule kumele ashiye phansi noma amiswe emsebenzini.
Lowo owayenguNdunankulu wase-Free State ubhekene namacala angama-21 okukhwabanisa nenkohlakalo ngokukhwabanisa imali ezisigidi engama-R220 ye-asbestos.
Kanti uGumede usengabuyela esiShayamthetho sesiFundazwe saKwaZulu-Natali nasemisebenzini yakhe ye-ANC.
UGumede waqashwa njengelungu lesiShayamthetho sesiFundazwe (i-MPL) ngoNcwaba, kodwa i-ANC yabe isimcela ukuthi aphume esikhundleni ngenxa yala macala.
Ugcine ukuvela enkantolo yamacala okuhweba eThekwini ngeviki eledlule kanti icala libe selihlehliselwa kumhla zingama23 kuNdasa kowezi-2021.
UGumede nabasekeli bakhe eqenjini bathi la macala abeyitulo, kepha osopolitiki bamaqembu aphikisayo bacabanga okuhlukile.
UMengameli we-IFP nomholi wamaqembu aphikisayo asemthethweni esiShayamthetho, uVelenkosini Hlabisa, uthe “kukhombisa ukuthi i-ANC ayikaze izimisele ngokulwa nenkohlakalo. Bathumela abantu ababhekene nezinsolo ezinzima zenkohlakalo.”
Uma etholwa enecala, kuzobe sekuphelile ukufeza izifiso zakhe kwezepolitiki, okubalwa nokubuya njengosihlalo wesifunda saseThekwini. Kodwa uma amacala esulwa, uGumede angaphinda abe yiMeya, okuyisikhundla asuswa kuso isigubhukane ngonyaka odlule yiqembu lakhe.
UGumede nabalandeli bakhe bahlela ukumphushela phambili esikhundleni esiphezulu emhlanganweni we-National General Council we-ANC ngonyaka ozayo.
Yize eyilungu lePhalamende, uGumede uvunyelwe ukubanga izikhundla zeqembu ezingeni lesifunda njengoba engeyena owanoma yiluphi iqembu eliphezulu njengeKomidi eliPhethe lesiFundazwe.